Umaki: ucwaningo lokuqukethwe | Martech Zone
Umaki: ucwaningo lokuqukethwe
Ungawathuthukisa Kanjani Amakhono Akho Okubhala
NgoLwesine, Juni 18, 2020 NgoMsombuluko, Februwari 1, 2021 Douglas Karr
Lokhu kuhlelwa kwemininingwane ye-infographic, ukwenza, ukwakheka, ubuciko, nokuthi ungaqala kanjani ngokuthuthukisa amakhono akho okubhala.
Njengomeluleki we-SEO osebenzayo, ngivivinye futhi ngasebenzisa cishe wonke amapulatifomu emakethe. Ngokwethembeka konke, bengilahlekelwa yithemba ebuningini bamapulatifomu ayizidudla empeleni ebeziyimfumba nje yabahloli abaphihlizwe baba ithuluzi elilodwa abathengisi abathanda ukulibiza ngokuthi yi-SEO audit. Ngiyabazonda impela. Amaklayenti ayevame ukuzama eyodwa bese kuthi okwesibili aqagele umsebenzi omkhulu esasiwenza ukuthola isayithi labo